ယူကရိန်းမှာ ရုရှားတပ်တွေရဲ့ ကျုးလွန်မှု စစ်ရာဇ၀တ်မှုမြောက်နိုင်ကြောင်း ကုလသတိပေး
FILE - French forensics investigators, who arrived in Ukraine for the investigation of war crimes amid Russia's invasion, stand next toamass grave in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine, Apr. 12, 2022.
ယူကရိန်း ကျူးကျော် စစ် အတွင်း ရုရှား တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ကျူးလွန်တယ်လို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့သားချင်းစာနာမှုနဲ့ လူ့အခွင့်ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု အများအပြားဟာ စစ်ရာဇ၀တ်မှု မြောက်နိုင်ကြောင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်းက ကုလသမဂ္ဂ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တခုက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ယူကရိန်း ကျူးကျော် စစ် အတွင်း ရုရှား တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ကျူးလွန်တယ်လို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့သားချင်းစာနာမှုနဲ့ လူ့အခွင့်ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု အများအပြားဟာ စစ်ရာဇ၀တ်မှု မြောက်နိုင်ကြောင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်းက ကုလသမဂ္ဂ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တခုက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရုရှားရဲ့ ယူကရိန်း ကျူးကျော်စစ် စခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၇၆ ရက်တာ အတွင်း ရာနဲ့ချီတဲ့ ချိုးဖောက်မှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့က မှတ်တမ်းပြုစုထားတာပါ။ အခု သက်သေ အထောက်အထား စုစည်းချက်ဟာဆိုရင် အဲဒီ ကာလအတွင်း ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ကျူးလွန်မှု အတိုင်းအတာကို မခြုံငုံမိသေးကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး မစ်ရှင် အကြီးအကဲ Matilda Bogner က ပြောပါတယ်။
ရုရှား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေက အရပ်သားတွေကို ဖမ်းဆီးတာ တချို့ကိုလည်း မှတ်တမ်း ပြုစုထားပါတယ်။ အများစုကတော့ လူငယ် အမျိုးသားတွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ဘယ်လာရုစ်ကနေ ရုရှားကိုပို့ပြီး စစ်ကြောရေး ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွေမှာ ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး မစ်ရှင် အကြီးအကဲ Matilda Bogner က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခု နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့ အရပ်သား သေဆုံးမှု ၇၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ သတ်ဖြတ်ခံရမှု ၃,၃၉၀ ဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် အရေအတွက် ဒီထက် များနိုင်တယ်လို့လည်း Bogner က ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ သွားရောက်တဲ့ ဒေသ အများအပြားမှာတော့ ကျောင်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေ၊ လူနေ အိမ်ယာ အဆောက်အအုံတွေ ဖျက်စီးခံရတာ တွေ့ခဲ့ရကြောင်းလည်း သူမက ပြောပါတယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံ တ၀န်းမှာ ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး၊ မူဆလင် ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်ရာ နေရာ အနည်းဆုံး ၅၀ ပျက်စီးနေကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
တရားဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်မှု၊ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှု၊ အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုနဲ့ အစဖျောက်မှုတွေ အပါအ၀င် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု ဆိုင်ရာ ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေလည်း ကုလသမဂ၈ အဖွဲ့က ရရှိနေကြောင်းလည်း သူမက ပြောပါတယ်။
ယူကရိနျးမှာ ရုရှားတပျတှရေဲ့ ကြုးလှနျမှု စဈရာဇဝတျမှုမွောကျနိုငျကွောငျး ကုလသတိပေး
ယူကရိနျး ကြူးကြျော စဈ အတှငျး ရုရှား တပျဖှဲ့တှရေဲ့ ကြူးလှနျတယျလို့ စှပျစှဲထားတဲ့ နိုငျငံတကာ လူ့သားခငျြးစာနာမှုနဲ့ လူ့အခှငျ့ရေး ဆိုငျရာ ဥပဒေ ခြိုးဖောကျမှု အမြားအပွားဟာ စဈရာဇဝတျမှု မွောကျနိုငျကွောငျး ယူကရိနျးနိုငျငံတှငျးက ကုလသမဂ်ဂ စောငျ့ကွညျ့ရေး အဖှဲ့တခုက ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
ရုရှားရဲ့ ယူကရိနျး ကြူးကြျောစဈ စခဲ့တဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၇၆ ရကျတာ အတှငျး ရာနဲ့ခြီတဲ့ ခြိုးဖောကျမှုတှကေို ကုလသမဂ်ဂ အဖှဲ့က မှတျတမျးပွုစုထားတာပါ။ အခု သကျသေ အထောကျအထား စုစညျးခကျြဟာဆိုရငျ အဲဒီ ကာလအတှငျး ရကျစကျကွမျးကွုတျတဲ့ ကြူးလှနျမှု အတိုငျးအတာကို မခွုံငုံမိသေးကွောငျး ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေး စောငျ့ကွညျ့ရေး မဈရှငျ အကွီးအကဲ Matilda Bogner က ပွောပါတယျ။
ရုရှား လကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့တှကေ အရပျသားတှကေို ဖမျးဆီးတာ တခြို့ကိုလညျး မှတျတမျး ပွုစုထားပါတယျ။ အမြားစုကတော့ လူငယျ အမြိုးသားတှေ ဖွဈပွီး သူတို့ကို ဘယျလာရုဈကနေ ရုရှားကိုပို့ပွီး စဈကွောရေး ထိနျးသိမျးရေး စခနျးတှမှော ခြုပျနှောငျထားကွောငျး ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေး စောငျ့ကွညျ့ရေး မဈရှငျ အကွီးအကဲ Matilda Bogner က ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
အခု နောကျဆုံးထုတျပွနျခကျြတှမှောတော့ အရပျသား သဆေုံးမှု ၇၀၀၀ ကြျောရှိပွီး အဲဒီထဲမှာ သတျဖွတျခံရမှု ၃,၃၉၀ ဦးလညျး ပါဝငျပါတယျ။ အမှနျတကယျ အရအေတှကျ ဒီထကျ မြားနိုငျတယျလို့လညျး Bogner က ပွောပါတယျ။
ကုလသမဂ်ဂ စောငျ့ကွညျ့ရေး အဖှဲ့ သှားရောကျတဲ့ ဒသေ အမြားအပွားမှာတော့ ကြောငျးတှေ၊ ဆေးရုံတှေ၊ လူနေ အိမျယာ အဆောကျအအုံတှေ ဖကျြစီးခံရတာ တှခေဲ့ရကွောငျးလညျး သူမက ပွောပါတယျ။ ယူကရိနျးနိုငျငံ တဝနျးမှာ ခရဈယာနျ၊ ဂြူး၊ မူဆလငျ ဝတျပွု ကိုးကှယျရာ နရော အနညျးဆုံး ၅၀ ပကျြစီးနကွေောငျးလညျး ပွောပါတယျ။
တရားဥပဒမေဲ့ သတျဖွတျမှု၊ ညှဉျးပနျး နှိပျစကျမှု၊ အုပျစုဖှဲ့ မုဒိမျးပွုကငျြ့မှုနဲ့ အစဖြောကျမှုတှေ အပါအဝငျ မုဒိမျးပွုကငျြ့မှု ဆိုငျရာ ယုံကွညျရလောကျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှလေညျး ကုလသမဂ၈ အဖှဲ့က ရရှိနကွေောငျးလညျး သူမက ပွောပါတယျ။
ယူကရိန်း အမျိုးသမီး စစ်သည်များ
ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်